Imvelaphi yamaphephadonga eDynamic, ngoku asimahla okwexeshana | Ndisuka mac
Ngaba ukruqukile yimifanekiso yamaphephadonga ebandakanya ukungagqibeki? Ngaba ukhathele kukukhangela amaphephadonga amatsha kunye noqobo anika umnxeba omtsha kwi-Mac yakho? Andazi ngawe, kodwa iyenzeka kum rhoqo, enyanisweni, ndihlala nditshintsha iphepha lodonga rhoqo kwiintsuku ezimbalwa kodwa ngoku, enkosi Imvelaphi yamaphephadonga aMandlasinako unemifanekiso emininzi yamaphephadonga eguqukayo ngokuzenzekelayo. Kwaye, isimahla ixesha elilinganiselweyo.
Ngemvelaphi yamaphephadonga eDynamic, awusoze udinwe kukubonakala kwidesktop yakho ye-Mac njengoko isinika yona imixholo emithandathu eyahlukeneyo (iTunes, Parallax, iVidiyo, iQuartz, iNkqubo kunye nexesha) eya kwenza iqela lethu libukeke liloluntu ngokupheleleyo. Kodwa khumbula ukuba isithembiso sinokuphela nangaliphi na ixesha ukhawuleze ukhuphele usetyenziso xa ufuna ukusebenzisa isaphulelo kwaye usifumane simahla.
Idesktop eyahlukileyo eneMvelaphi yeDynamic Wallpaper
Con Imvelaphi yamaphephadonga aMandla Okokugqibela siya kuba nakho ukufumana idesktop yeMac yethu eyahluke ngokupheleleyo kwinto esele siyibonile ukuza kuthi ga ngoku, hayi kuphela.
Olunye lweempawu zalo ezibalaseleyo yile Imo iTunes Isebenza ngokwayo xa umculo uqala. Ngale ndlela, umzekelo, sinokuba nomfanekiso wengoma esimamele kuyo kwi-iTunes njengesikrini esingasemva; Ngapha koko, siya kuba nakho ukukhetha phakathi komfanekiso ongacwangciswanga, umfanekiso wengoma okanye yonke imifanekiso eya kutshintsha ngokuzenzekelayo yonke imizuzwana engama-20.
Kwaye naye imo yevidiyo Uyakwazi ukudlala nayiphi na ividiyo njengephepha lodonga, ukwazi ukongeza iifayile ezininzi ukuze ziboniswe ngokungathi ziluluhlu lokudlala.
Ukongeza kwiindlela zeTunes neVidiyo, Imvelaphi yamaphephadonga aMandla ikwabandakanya Imowudi yeParallax, ukunika imvakalelo yobunzulu kwidesktop yakho yeMac kwaye onokuyisebenzisa nangayiphi na imvelaphi, ifayile ye Imo yexesha, ekuvumela ukuba ujonge umhla kunye nexesha kwidesktop, i Imowudi yeQuartz ukuya kuthi ga Imo yenkqubo enkosi apho unokujonga khona ngokusetyenziswa kwe-CPU okanye isantya sonxibelelwano lwakho nenethiwekhi.
Kwaye ukuba konke oku kubonakala kukuncinci kuwe, kubandakanya ne Iwijethi yeZiko lokwazisa, Inkxaso yezikrini ezininzi onokuthi uzenze ngokwahlukeneyo, kwaye nkqu ungadibanisa iindlela ezininzi, umzekelo, ukushiya iNkqubo kunye nexesha leendlela ezisebenzayo ukujonga olu lwazi ngelixa imifanekiso yeengoma zakho iTunes zidlula.
Imvelaphi yamaphephadonga aMandla Iyahambelana neMacOS 10.12 ukubheka phambili, inexabiso eliqhelekileyo le- € 3,49 kwiVenkile yeApple yeMac kwaye ngoku ungayifumana simahla okwexeshana. Correeeee !!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Imvelaphi yamaphephadonga eDynamic, ngoku asimahla okwexeshana